Dagaalka Aqalka Sare iyo guddoonka sare golaha shacabka oo xoogeystay iyo Aqalka Sare oo jawaab adag soo saaray | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home News Dagaalka Aqalka Sare iyo guddoonka sare golaha shacabka oo xoogeystay iyo Aqalka...
Dagaalka Aqalka Sare iyo guddoonka sare golaha shacabka oo xoogeystay iyo Aqalka Sare oo jawaab adag soo saaray
DOOXO NEWS MUQDISHO ;Waxaa kasii dara dagaal siyaasadeedka u dhaxeeya Aqalka Sare iyo Guddoonka Sare ee Golaha Shacabka kadib markii lasoo saaray warqad difaaceysa kaalinta mugga leh oo ay Aqalka Sare ku leeyahiin ansixinta sharciyada.
Aqalka Sare waxey sharci darro u arkeen warqaddii uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka u diray Wasaaradda Dastuurka eek u saabsanaa qaraarka Matalaadda Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare.
Warqadaas ka timid Guddoonka Sare ee golaha Shacabka waxey Aqalka Sare ku tilmaameen mid xad gudub ku ah habraaca xeer dejinta dalka eek u qeexan Cutubka 6-aad madaxa afaraad ee Dastuurka KMG.
Waxaa intaas dheer in Aqalka Sare ay waxba kama jiraan kasoo qaadeen afarta xeer ee qabyo tirka u ahaa sharciga doorashooyinka qaranka heer Federaal haddiiba aan la waafajinin habraaca xeer dejinta dalka.
Sidaas darteed waxey ugu baaqeen Guddiga doorashooyinka inta laga saxaayo aysan xeerkaas u isticmaali Karin doorashada Qaranka.
Warqadda ay soo saareen Aqalka Sare waxaa ku xusan soo jeedin ku socota Guddoonka Golaha Shacabka kaas oo ku saabsan in sharciyada matalaadda Gobolka Banaadir ay u baahan tahay in loo dhameystiro habraaca dastuuriga ah.
Ugu dambeyntiina Aqalka Sare waxey soo jeediyeen in la akhriyo qodobka 9-aad ee Dastuurka KMG iyo 12-aad (6) ee sharciga doorashooyinka Qaranka ee Heer Federaal.